समाजका नजरमा भड्किलो तीजको चीरफार | himalayakhabar.com
| Saturday August 8th, 2020
समाजका नजरमा भड्किलो तीजको चीरफार
– कमला अधिकारी लोहनी
हिमालयखबर | 27th Jul 2020, Monday | २०७७ श्रावण १२, सोमबार ०९:००
माैसम फेरि पनि तीजको आएको छ । विगतका वर्षहरूमा यतिखेर घर आँगनमा तीजको छुट्टै रौनक भैसक्थ्यो । परदेशको व्यस्त जीबनमा घरदेशको स्वाद मिलाउँदै बिदाका दिनहरु तीजकै रंगले सजिने थिए। फेरि उमङ्गसँगै महिनौं दर खाएको चर्को आलोचना पनि त त्यत्तिकै आउँथ्यो । हाँसेर अनि नाचेर ती आलोचनालाइ उँडाउनुको मज्जा पनि बेग्लै हुन्थ्यो ।
तर यसपाली कोरोना कहरले गर्दा तीजको माहोल नितान्त अलग्गै बनेको छ । तैपनि आफु जान्ने भए देखिनैं मनाउँदै आएको सबै भन्दा मन पर्ने चाड नै तीज हो मेरा लागि । त्यसैले बाहिर जे जसो भएपनि मनमा त तीज आएकै छ ।
सानो हुँदा पक्कै पनि तीजको राम्रा नाना र मिठा खानाले मन तानेको हुनुपर्छ। तर ठूलो हुँदै गएपछि तीजले नारीहरुलाइ दिएको स्वतन्त्रताले मन तानेको थियो । किनकि काकी, भाउजुहरु सबैले माइत जान बिदा पाउँथे । कामको चापले या कुनै कारणबस माइत जान नमिलेपनि तीज भरी मेलापात या भारी काम गर्न पर्दैनथ्यो । तर हरेक घरमा पशुपालन त थियो नैं, तीज अगाडी नैं घाँस काटेर राखिन्थ्यो र अपुग भएमा काट्नका लागि बारीको पाटामा घाँस पालेको हुन्थ्यो ।
अझै बर्षै भरी खाना नपकाउने बा, काका र दाजुहरु समेत तीजको दर पकाउन सहयोग गर्नुहुन्थ्यो । अरु बेला बा, दाइहरुको अगाडी सिधा हेर्नपनि डराउने भाउजुहरु तीजमा पुरै बेदना र बिद्रोहका गीत गाएर छमछम नाच्न सक्नुहुन्थ्यो । गीतमा छुच्ची सासु, ससुरा लगायत गाउँमा घटेका घटना देखी राजनीतिसम्म जोडीन्थे । दाइजो नदेउ बाबा, बरु छोरी पढाउ भन्ने खालका गीतहरुले समाजका आँखा खोलेका हुन्थे।
हाम्रो गाउँघरमा जनैपूर्णीमा लगत्तै तीजको रौनक सुरु हुन्थ्यो । आमा,हजुरआमाले बारीको काँक्रो, घिराैला, आरु आदि नटीपेरै साँच्नु हुन्थ्यो । घाम लागेको दिन पारेर आँगनमा अनदी र झिनुवाको धान सुक्थे, चामल कुटिन्थे, घ्यूको भाँडा भरिन्थे ।
बुहारीहरु खेतबारीको काम छिटो सकेर माइत जाने तरखरमा हुन्थे । छोरी चेली लिन जानेको घुइँचो नैं लाग्थ्यो । यो लगभग तीन दशक अगाडीको कुरा हो । त्यतिबेला सम्म हाम्रो गाउँघरमा जागीरे महिलाहरु औंलामा गन्न सकिने मात्र थिए । बिस्तारै तीजलाइ समाजका नराम्रा पाटाहरु औंल्याइ दिने र सकारात्मक सन्देश दिने दिनको रुपमा हेर्न थालियो ।
तीजको दिनमा गीतबाट जे जति प्रहार गरेपनि छुट थियो नारीहरुलाइ । त्यसैले गीत र नाचको तैयारी गर्ने काम जनैपूर्णीमाको बेलुकाबाट सुरु हुन्थ्यो । हरेक दिन बेलुका एक घन्टा जति आमा, हजुरआमा, भाउजुहरुसँग बसेर तीज गीतको तैयारी हुन्थ्यो। कापीको पानामा संकलित गीत लेखेर राख्दा ८० बर्ष कटी सकेकी हजुर आमा खुशीले ‘त्यो कापीमा लेखेको गीत गाओ त“ भन्दै कुप्री परेर नाच्नुहुन्थ्यो । तैयारी गिती सन्देशहरु हरेक चेलीका घर, माइत हुँदै समाजमा पुग्थे।
हुन त तीजको दिनमा पनि चरम दमनमा कारण आंसु झार्नेहरुपनि त थिए । तैपनि नारीहरुले नैं गीत बनाएर बिरोध गर्ने प्रयास गर्थे । बिबाहित महिलाहरु प्रायः ब्रत बस्थे, पुजा गर्थे । तर श्रीमानको खुट्टाको पानी खाएको मैले कहिल्यै देखिन। आमा, काकीहरुले पनि पुजा गर्ने, दानदक्षिणा गर्ने मात्र गर्नुहुन्थ्यो ।
मेरा बा पुरोहित समेत हुनुहुन्छ । तीजको दिनमा उमामहेश्वरको पुजा आरधाना गरिन्थ्यो । बा ले पढ्ने पुजाको किताबमा न त श्रीमानको गोडाको पानी खानेकुरा लेखिएको थियो, न त श्रीमानको हातको पानी खाएर ब्रत तोड्ने कुरा नैं । तर पुजाको बिधिमा कतै अटल सौभाग्यको कामना गर्दै श्रृङ्गारका सामानहरु भने चढाइन्थ्यो ।
मलाइ लाग्छ हामीले गाउँने गरेका गीत जस्तै समय बदलिंदै गयो । नारीहरु घरबाट पर सर्दै गए, शिक्षा र चेतनाको स्तर बढ्दै गयो । महिलाहरु जागीर खाने, अझै धेरै ब्यस्त र जिम्मेवार हुँदै गए ।
तर पछिल्ला समयहरुमा सहरी जीबन शैलीहरुको प्रभाब पर्दै गयो । श्रीमानकै घरमा तीज मान्न थालियो । घर माइती वल्लोपल्लो गाउँ मात्र नभएर निकै टाढा हुँदै गयो । नारीहरु कार्य ब्यस्तताका कारण दर खाने दिनमा माइत पुग्न नसक्ने भए ।
बिस्तारै तीज समुहमा मनाउने चलन आयो । समय अनुकुल मिलाएर बिदाका दिनहरुमा दर खाने चलन आयो । आमा, सासु, छोरी, बुहारी, नन्द, भाउजु, लगायतका सबै नारीहरु सँगै बसेर दर खाने चलन निकै नैं राम्रो हो । यसले नारी एकताको राम्रो सन्देश पनि दिएको छ।
नारीहरुलाइ सम्मान स्वरुप टोल, छिमेक, अफिसहरुमा दर खुवाउँदा तीज कसरी भड्कीलो भयो ? आफ्नो परीश्रमको कमाइ बचत गरेर राम्रा गहना कपडा लगाउँदा कतातिर भड्किलो देखियो ? या श्रीमानको नै कमाइ लागाउँदा समाजलाइ के असर पर्यो ? समस्या पहिरनको कि सोचको ?
हुन त अलिकति देखासिकी, तडकभडक गर्ने परीपाटी बढेकै हो । यसमा मेरो पनि फरक मत छैन । तर आलोचनाले यसको समाधान हुँदैन । बिसङ्गतीहरु प्राय अज्ञानताले नै भएका छन् । जब हरेक नारीहरु ज्ञानको ज्योतिले समाज नियाल्न सक्ने हुन्छन्, सहि या गतल आफैं छुट्याउन सक्छन् । नारीहरुलाइ गहना, कपडामा सजाएर कठ पुतली बनाउने पनि त आखीर पुरुषहरु नै हुन । नारीहरुले अलिकति अगाडी बढेको देखेर नाना थरी दोष लगाउने पुरुषबादी समाजले आफ्नो अमुल्य समय बिपन्न नारीहरुको उत्थानमा लागाउन ढिलो भै सकेको छ ।
सुन/गहना भनेको हरेक परीवारको सिंगो अर्थतन्त्र हो । मेरी आमाले घेरै पल्ट आफ्नो कानको मुन्द्री खोलेर बैंकमा राखेकी थिइन । बैंकमा धितो राखेर निकालेको त्यही पैसाबाट मैलै पढ्ने मौका पाएँ । आज म निर्धक्क आफनै स्वाभिमानमा बाँचेकी छु ।
समाजको चिन्ता गर्ने हरुले मैंले लगाएको छड्के तिलहरीको आलोचना गर्ने कि दुर दराजका बिपन्न दिदी बहिनीहरुलाइ शीप, शिक्षा दिएर अर्को तीजमा आफनै कमाइले छड्के तीलहरी लगाउन सक्ने बनाउने ? अभर परेको बेलामा त्यहि तिलहरी बन्धकी राखेर घरको अर्थतन्त्र समाल्न सकुन हरेक नारीहरु ।
हाम्रो संस्कार अनुसार जनै पर्णीमामा पुरुषहरुले जनै नफेरेको त कतैपनि आलोचना भएको सुनिदैन । ब्रत नबस्ने दिनमा दर खाएकोमा यति धेरै चिन्ता किन ?
अझै दरमा मदिरा सेबन गरे महिलाले भन्ने चर्को आवाज सुनिन्छ । मदिरा सेवनले पुरुष, महिला कसैलाइ पनि फाइदा गर्दैन । तर तीजमा महिलाले सेवन गरेको मदिराको मात्र किन यति धेरै चर्चा ? खै कुन मदिराको बोतल/प्याकेटमा पुरुष या महिलाले मात्र सेवन गर्ने कुरा लेखेको छ ? समाजका नराम्रा पाटाहरुको आलोचना गर्न आवश्यक छ । तर पहिले लिङ्गभेदको चस्मा अब मज्जैले खोलिनुपर्छ ।
अब तीजको गीत तिर जाऔं । समय र परीबेश अनुसार तीजका शब्द अनि भाकाहरु फेरीएका छन् । तर शहर बजारका स्टुडियोहरुमा एक छिन पिठ्यूँमा डोको बेकेर गाइएका बेदनाका तीज गीतहरु सहि र “नाच्छौं हामी डिस्कोमा तीज“ गलत भनेर हेर्ने सोचहरु अर्थहिन छन् । मेरो बुझाइमा बरु डिस्कोमा नाच्ने गीत नै समय सापेक्ष छ । शहर बजारमा जे भएको छ त्यहि देखाएको छ । बेदनाका गीत बनाउनेहरुले सम्बन्धित ठाउँमा गाइएका गीतहरु देखाउनु पर्यो नि ।
हो हाम्रो समाजमा नारीहरु पीडीत पक्कै छन् । तर अचेलका तीज गीतहरुमा रेकर्ड गरिए झैँ बिकराल अबस्था कतै पनि छैन । फेरि जनचेतनाका लागि बनाइएका हुन् भने यस्ता गीतहरु सम्पन्न महिलाहरुले मात्र हेर्न पाउँछन । पीडित महिलाका घरमा न साधन हुन्छ न फुर्सद नैं । अझैपनि बिरालो खोजीखोजी बाँधेर श्राद्द गरे जस्तो तीज भन्ने बित्तीकै सम्पन्न महलहरुमा बसेर परापूर्वकालका बेदनाका गीतहरु गाएर नाच्न पर्ने हो र ? समय सापेक्ष गीत गाउँदा/नाच्दा तीज कसरी भड्किलो भयो ? यति लेखिरहँदा दुख पीडामा बाँची रहेका चेलीहरुको अपमान गरेको पटक्कै हैन । मात्र हाम्रो सोचको कुरा गरेकी हुँ ।
महिलाहरुलाइ इज्जत, सम्मान गरेर, पुरुषहरुले पनि तीजका गीतमा नाच्न गाउन साथ दिँदा फरक पर्छ जस्तो लाग्दैन । पहिले हामीहरु बा। दाजु, भाइ सबैको अगाडी नाच्ने गाउने गरिन्थ्यो । उहाँहरुले साथपनि दिनु हुन्थ्यो । तर महिलाकै पहिरन समेत गरेर अतिरन्जीत तरिकाले बनाइएका तीजका गीतहरु महिलाहरु प्रतिको घोर अपमान हो ।
मानिस सामाजिक प्राणी हो । समाजका बिसङ्गतिहरुको बिरोध गर्नु हरेक सचेत नागरिकको कर्तब्य हो । तर समय अनुसारको परीबर्तनहरु भित्रका सकारात्मक पाटाहरु ओझेल नपरुन । परीवर्तनका नकारात्मक पक्षहरु मात्र औंल्याएर पुरै समाज आतंकित नपारौं । सकारात्मक सोचको बिकास गरौं ।
संसारका हरेक कुनामा छरीएर रहनु भएका नेपाली नारीहरुमा आउँदै गरेको तीजको शूभकामना ।
भारतमा एकैदिनमा ५० हजार ५२५ जना संक्रमित
२०७७ श्रावण १२, सोमबार ०८:१५
नयाँ दिल्ली । भारतमा कोरोना भाइरसबाट दैनिक सङ्क्रमितको संख्या अत्यधिक वृद्धि भएको छ । केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले सोमबार दिएको जानकारीअनुसार ...
विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या एक करोड ६५ लाख नाघ्यो
२०७७ श्रावण १२, सोमबार १०:००
२०७७ श्रावण २३, शुक्रबार ०९:१५ पूरा पढ्नुहोस् »
कोरोना संक्रमणबाट विश्वभर सात लाख १४ हजारको मृत्यु
२०७७ श्रावण २२, बिहीवार १०:१४ पूरा पढ्नुहोस् »
भारतमा ६७ प्रतिशत कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज
२०७७ श्रावण २२, बिहीवार १०:००
नेपालमा थपिए ३६० संक्रमित, थप पाँच जनाको मृत्यु
२०७७ श्रावण २२, बिहीवार ०७:१५
संकटको समयमा सारथि बनेकी हिरा पाण्डेलाई ‘कोभिड–१९ अवार्ड’
लकडाउनका कारण नेपालमा एक चौथाइको रोजगारी कटौती
२०७७ श्रावण २१, बुधवार ०९:००
कोरोना संक्रमण बढेपछि १४ जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा कर्फ्यु जारी
२०७७ श्रावण २१, बुधवार ०८:००
चाडपर्व मनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड पारित, पिसिआर परीक्षण छ लाख पुर्‍याइने
२०७७ श्रावण २१, बुधवार ०७:४५
कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा एकैदिन पाँचसहित ६३ जनाको मृत्यु
२०७७ श्रावण २१, बुधवार ०७:१५